List Categories and Listings by B: Root - Consumer Reviews and Ratings
Bago (ပဲခူး) (1)Bago Gov (ပဲခူးတိုင်း ​ဒေသကြီး အစိုးရ) (0)Bago Parliament (ပဲခူးတိုင်း ​ဒေသကြီး လွှတ်တော်) (0)Banks (ဘဏ်) (32)Banned Drugs (ပိတ်ပင်ဆေးဝါးများ) (0)Banned F&B Brands (ပိတ်ပင် စားသောက်ကုန်) (0)Bars and Clubs (ဘား၊ ကလပ်) (in Yangon (ရန်ကုန်)) (3)Bars and Clubs (ဘား၊ ကလပ်) (in Mandalay (မန္တလေး)) (0)Bars and Clubs (ဘား၊ ကလပ်) (in Bagan (ပုဂံ)) (0)Bars and Clubs (ဘား၊ ကလပ်) (in Inle/Kalaw (အင်းလေး/ကလော)) (0)Beverages (အဖျော်ယမကာ) (7)Blood Donation (သွေးအလှူခံ ဌာန) (4)Booking (1)Buddhist (ဗုဒ္ဓဘာသာ) (36)	Results 1 - 10 of 116
Brighter Future Myanmar Foundation အနာဂတ် အလင်းတန်း ဖောင်ဒေးရှင်း (ကမ္ဘောဇဘဏ်မှ တည်ထောင်ထားသည်။) ကမ္ဘော​ဇဘဏ်​လီ​မိ​တက် (အနာ​ဂတ်​အလင်း​တန်း​မြန်​မာ​ဖောင်​ဒေး​ရှင်း)၊ AIR KBZ ရေ​ဘေး​ကယ် ...Category:NGO, INGO (အသင်းအဖွဲ့) Votes5
Bagan, Myanmar The monuments seem to overwhelm the landscape. There are about 2,000 of them covering an area of 16 square miles on the eastern bank of the Ayeyarwady ...Category:Others (အခြား) Votes1
Blue Bird Blue Bird Bagan is located in the peaceful village of New Bagan, where traditional lifestyles are still the norm. The small town, justashort walk fr ...Category:Hotels in Bagan (ပုဂံရှိ ဟိုတယ်) Votes1
Build+Con Myanmar It is the inaugural platform poised to penetrate the market and explore new business opportunities in the country. Building and construction are two c ...Category:Tradeshows (ကုန်စည် ပြပွဲ) Votes1
Burma Center Prague The Burma Center Prague isanon-profit and non-governmental organization based in the Czech Republic. Our goal is to restore peace, justice, democrac ...PragueCategory:Expats (ရေခြားမြေခြား) Votes1
Balentino Internet Cafe - Pazuntaung အမှတ်(၉၈/၁ဝဝ)၊၄၉လမ်း၊အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်။ ရန်ကုန်
Best Myanmar Job Category:Job Search (အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေး) Votes1
Buddhist Bible (Myanmar Version) Tipitak... ဂေါတမ ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော် မူခဲ့သည့် တရားများ အားလုံးကို မြန်မာဘာသာဖြင့် အလွယ်တကူ နားလည်နိုင် ဖတ်ရှုနိုင်သည့် နေရာဖြစ်သည်။Category:Buddhist (ဗုဒ္ဓဘာသာ) Votes3
Best Select Category:Job Search (အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေး) Votes1
Burma Dental Volunteers Administrator and Trustee
Sharon BiererCategory:Hospitals/ Clinics (ဆေးရုံ/ ဆေးခန်း) Votes1